Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday Labo Baar oo ku yaala woqooyi BariKenya. – SBC
Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday Labo Baar oo ku yaala woqooyi BariKenya.
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaarisa ee u dhow xuduuda Soomaaliya ayaa ku waramaya in Saqdii dhexe ee Habeenkii xalay weerar rasaas ah lagu qaaday laba baar oo ku yaala Bartmaha magaalada halkaasi oo lagu dilay Labo ka mid ah ciidamada amaanka sida ay sheegeen Goobjoogayaal diidaday in magacooda la sheego.
Goobjoogayaal Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa Wakaalada wararka ee Reuters siyaabo kala duwan ugu waramay mid ka mid ah ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay ku yimaadeen Gaari goobta ay weerareen iyaga oo rasaas ku dilay ilaaladii goobta ka dibna bilaabay inay beegsadeen qof kasta oo baararkaas galayay ama ka soo baxayay.
Sarkaalka Ciidamada Gobolka Woqooyi Bari Kenya Leo Nyongesa ayaa sheegay in Laba qof ay ku dhimatay weerarkaas lagu qaaday goobta lagu caweynayay habeenkii xalay, dhinaca kalena mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka oo ka gabsaday in Magaciisa la sheego ayaa xaqiijiyay in 28 qof ay ku dhaawac meen weerarkaas oo ay ku jiraan Saraakiil Ciidamada ka tirsan iyo Haweeen.
ka dib weerarka Goobta waxaa meesha soo gaaray gadiidka gurmadka degdega ah kuwaasi oo bilaabay inay qaadaan Dhaawacyada iyo meydadka goobta weerarka lagu qaaday wax ku noqday mid ka mid ah dhaawacyada ayaa ku biiray dadka dhintay.
Weeraradan ayaa sii batay tan iyo markii ciidamada Kenya ay ka soo talaabeen xuduuda dalka soomaaliya bishii October waxaana sii kordhay weerarada ay xarakada alshabaab ka geysaneyso gudaha wadanka Kenya kuwaasi oo jawaab u ah weerarka Kenya ee Soomaaliya.
Ciidamada amaanka Kenya ayaa sheegay inay gacanka ku hayaan 15 qof oo ka mid ah dad iskugu jira Kenyan iyo Somali loo haysto inay xiriir la leeyihiin Xarakada alshabaab oo dagaalo ciidamada Kenya kula gashay Gobolada Jubooyinka.